Kugara neInvestment yeMalta uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muMalta kune:
● Kugara nekudyara muMalta
● Ugari nekudyara kubva kuMalta
● Visa yegoridhe muMalta
● Pasipoti yechipiri kubva kuMalta
● Kugara nekudyara kweMalta nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muMalta uye Magweta e Kugara neInvestment muMalta uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muMalta zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara neveInvestment vamiririri veMalta vanopa masevhisi ekugara nekudyara muMalta, Residency nezvirongwa zvekudyara muMalta, Residency nehurongwa hwekudyara muMalta, yechipiri Residency nekudyara muMalta, mbiri Residency nekudyara muMalta, ugari uye ugari nekudyara muMalta , Kugara zvechigarire nekudyara muMalta, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muMalta, Kugara nehurongwa hwekudyara muMalta, Kugara nehurongwa hwekudyara muMalta, Citizenship nekudyara muMalta, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMalta, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMalta, wechipiri Citizenship nekudyara muMalta, hunyanzvi hwehukama nekudyara muMalta, pekugara uye ugari nekudyara muMalta, kugara uye ugari nekudyara muMalta, hupfumi Citizenship zvirongwa muMalta, Ugari nehurongwa hwekudyara muMalta, Citizenship nehurongwa hwekudyara muMalta, chechipiri pasipoti muMalta, yechipiri mapasipoti muMalta, yechipiri pasipoti purogiramu ndiri muMalta, mbiri kechipiri pasipoti muMalta, pekugara uye yechipiri pasipoti muMalta, repamutemo repasipoti repashure muMalta, yechipiri pasipoti nekudyara muMalta, yechipiri ugari pasipoti muMalta, yechipiri pasipoti chirongwa muMalta, chechipiri pasipoti zvirongwa muMalta, goridhe visa kuMalta, mavhiza endarama muMalta, zvirongwa zvendarama zveMalta, chirongwa chendarama vhiza muMalta, yechipiri vhiza yegoridhe kuMalta, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muMalta, vhiza mbiri yegoridhe muMalta, ugari uye visa yegoridhe muMalta, kugara uye visa yegoridhe. kuMalta, mugari vhiza mugari muMalta, dhiza vhiza scheme muMalta, goridhe visa zvirongwa muMalta.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muMalta nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muMalta ye Residency nekudyara: EUR 290,000
Nhanganyaya Malta uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezve Malta
Kana iwe uchida iyo nzira yehupenyu, nhoroondo, uye inoshamisa mamiriro ekunze iwe unofarira kugara muMalta!
Yakavakirwa makiromita makumi mashanu kumaodzanyemba kweSicily muMediterranean, Malta idiki diki yezvitsuwa zvinoratidzira mamiriro ekuMediterranean, hurongwa hwepamusoro-soro hwezvekurapa, uye vanhu vanotaura chiRungu. Malta saizvozvowo musha kune chikamu chekukwakuka kwepasirese uye kwave kuvandudza senzvimbo yezororo nguva inoita senge isingaperi yenguva nenguva.
Kupokana kwakakurumbira muMalta kunosanganisira chiteshi chengarava chakajeka uye guta guru reValletta - imba kune mainjiniya ekare, nzvimbo yekutengesa inofamba-famba, kunyanya nzvimbo huru dzekudyira, uye network yepasirese.
Imwe expat-inonyanya kudiwa ndiSliema, ipo pamusoro pemvura kubva kuValletta, uko kwaunowana kuwanda kwesarudzo dzakavakwa munguva pfupi yadarika Kumahombekombe ekuchamhembe kwechitsuwa chakakosha, nzvimbo yekumahombekombe yegungwa yakatarisana neSt.Paul Bay inokwevera mune chimwe chinhu chinonzwisisika chemapombi ekumberi nemigwagwa yayo yegungwa.
Kune avo vanotarisira kubva kure nazvo zvese, chitsuwa, chakajairika kuchamhembe chitsuwa cheGozo chinopa kufamba kunononoka kwehupenyu; chiyero chemakungwa akadzikama ona nzira dzekufamba-famba; matunhu, Mediterranean zviitiko; uye minda yekunhuhwirira, sango thyme. Zvakare, Gozo haisi yese yakanyarara mune zvakasikwa. Kune avo vari kutsvaga kuwirirana pakati pekudzikama uye kugarika, guta guru rechitsuwa ichi - Victoria — inzvimbo ine simba ine zvitoro, nzvimbo dzekudyira, mahofisi ehutano, uye zvakaringana chero zvaungade.
Kana iwe uri weEurophile uyo anofungidzira nezvekushandisa pamudyandigere akafukidzwa mune yakapfuma tsika uye nhoroondo yeNyika Yekare, zvakadaro aches kwemazuva anodziya akatakurwa nemucherechedzo wezuva rakajeka, matenga ebhuruu, uye kunze kwemanheru negungwa, panguva iyoyo funga kusiya basa. kuMalta, chitsuwa chakasiyana-siyana chiri pakati peGungwa reMediterranean.
Makiromita zana chete kubva kubhangi reSicily, Malta ndiyo nyika diki kwazvo muEuropean Union, asi inopa pasina mubvunzo kupfuura hukuru hwayo minuscule ingafunga: maguta akare akarere ane nyaradzo yega yega, kuwanda kwegore zviitiko zvekudyidzana uye zvinokwezva. , hukuru hwepasi rose, uye zvine musoro, nzira yakasarudzika yehupenyu. Chikamu chakanakisa ndechekuti zvisinei nekuti iine mamiriro ekunze eEuropean, chitsuwa ichi chinowanzo taura Chirungu.
MaBritish kubva nguva yakati yapfuura vakatanhamara Malta senzvimbo inoshamisira yekurega basa, asi maNorth America ari kungotanga kuwana matsimba ayo. Muchiitiko chekuti iwe wakanzwa chero chinhu chezviwi izvi, pamwe unowanzo zivana neValletta, guta guru rinotyisa reMalta, rine mbiri yepakati peguta dhizaini nemigwagwa yemigwagwa yemabwe epfuti inokurumidza kukudzosera kuzana ramakore regumi nenhanhatu.
Kugara Pano Kwakachipa
Iwe unogona kutenda kuti kugara pane yakanakisa zuva-yakatsvairwa chitsuwa cheMediterranean ndicho chinhu chakapfuma chaizvo chaigona kutakura. Hazvina kudaro muMalta. Madhora ako anogona kuenda zvinotyisa kure. Vamwe vakasiya mapombi ekare vanoti vanorarama zviri nyore sevashoma semadhora zviuru mazana maviri nemazana matanhatu-kana kutombopfuura mwedzi wega wega.
MuMalta, iwe unogona kuwana yakashongedzwa-mbiri-makamuri condos, ingori maminetsi gumi-kufamba munzira yegungwa, nekuti inongoita kunge $ 10 mwedzi wega. Kune yakashongedzwa-mbiri-kamuri ine gungwa kuona, tariro yekushandisa mune chero chiitiko $ 550 mwedzi wega wega ... izvo hazvisi zvinotyisa kufunga nezve izvo isu tiri kukurukura nezve maonero paMediterranean. Mutengo unowira muchiitiko chekuti iwe ungafarire kugara mukati megungwa kana pane chitsuwa chine mwero chitsuwa cheGozo.
Zvinhu zvekudya, kudya kunze, uye zvimwe zvakajairwa mutengo zvinodhura zvakapfupika pane zvaunogona kufungidzira. Semuenzaniso, unogona kuwana chirairo chakanakisa chemahombekombe chakazara chemanheru chemashoma semadhora makumi maviri nemaviri pamunhu- kusanganisira girazi rewaini yekuvakidzana. Zvimwechetezvo, zvichipiwa hushoma hushoma hwechitsuwa uye hupamhi (uye hunofungidzirwa zvine hungwaru) sisitimu yekutakura, vamwe vekare vanorova vachifara vachigara vasina mota, vachiponesa zviuru pazvikamu zvemotokari, kuchengetedza, uye mutengo wemota.
Bounty yeKuchengeta Iwe Unofara
Kunyange chokwadi chiri kuratidza kuti chitsuwa cheMalta chine zvitsuwa zvitatu zvinogara vanhu — chikuru zvacho (Malta) ingori ma122 mamaira — iwe uchaona kuti zviwi izvi zvinopa kurovedza kusinga peri. Pane zviripo zvinoramba zvichingoitika chimwe chinhu chichiitika.
Kazhinji, Gungwa reMediterranean rinopa kuwanda kwekudzoreredzwa, kubva mukushambira mune yakakosha ibwe bhuruu mvura kusvika pakusasa-tenderera mumativi akavharirwa, kuenda kune cruising, paddling, kana kayaking. Nhoroondo darling ichave iri kudenga, sezvo zviwi zviine hunyanzvi hwakakurumbira hwemachechi chaiwo kupfuura chero nzvimbo yepanyika. Unogona kupedza makore uchiongorora Megalithic Tembere dzeGgantija, zvisaririra zvevaRoma, tsika dzechinyakare, zvidziviriro, mapindu, dzimba dzepasirese dzeHondo Yenyika II, dzimba dzekunamatira dzinoyevedza dzezvitsuwa, uye uchiri kuramba uchitsvaga zvinhu "zvitsva".
Panguva iyoyo, kune mhemberero dzeMalta dzisingadaviriki. Mugore rose, vanhu vanodira mumigwagwa kurumbidza mhemberero dzinoverengeka dzinonakidza, mitambo, mabiko, kana mhando dzakasiyana dzevaraidzo. Senyika yeKaturike, yakawanda yemhemberero iyi iri muchitendero, asi iwe uchaonawo kuti mataundi mazhinji eMalta ane imwe mhemberero yakasarudzika yavo (seguta reSt.Julian "Gostra," uko vanhu vemuno edza kutamira kunzvimbo yepamusoro ye shaft yakaiswa mafuta pamusoro penzwi, nepo mapoka achivakurudzira).
Chitsuwa ichi zvakare chine nguva zhinji dzekudyidzana, semuenzaniso, iyo Malta Jazz Festival, iyo International Fireworks Mutambo, uye Notte Bianca - mutambo uko nzvimbo dzezvakaitika uye dzimba dzeumambo dzechitsuwa ichi dzinovhura magedhi avo uye dzinogamuchira vaenzi kuti vaone akasiyana mashoo uye kuratidzira usiku hwese.
Inharaunda Yemarudzi Akawanda
Pamusoro pekuti iwe une zviitiko zvakawanda pane mukana wekuti urege basa muMalta, zvisinei, iwe unowedzera zvakare yakakura, ine simba-inotaura Chirungu-inotaura ex-pat network yaunogona kukoshesa zviitwa izvi. Iyo 2011 Maltese Census yakawana kuti pamusoro pevane zviuru zvitanhatu veBritish ex-pats vanogara muMalta, padivi pe6,000 maAustralia uye vangangoita zviuru zviviri veCanada. Sumbu rinokoka, chitsuwa chine zvakawanda zvakarongedzwa kuungana kwepashure, avo vanowanzowana mangwanani eespresso, zvinwiwa zvemanheru, uye kudya kwese mudhorobha. Iwe zvakare uchawana masangano nekuita, semuenzaniso, iyo Ramblers 'Kirabhu, mashoma anomhanya makirabhu, emabhiza makirabhu makirabhu, mabhuku makirabhu, uye ndiko kutanga chete.
Kuendeswa kune Zororo reEurope
Muchiitiko chekuti iwe uchinyatsoda kusimuka kubva kuchitsuwa kwenguva yakati, iyo yasara yeEurope ingori pfupi ndege-kana kukwira chikepe-kure. Sicily inguva yehafu nehafu yekukwira chikepe uchienda, nepo Roma isiri iyo chaiyo awa kuburikidza nemhepo. Nharaunda dzakakosha dzemadhorobha, semuenzaniso, Paris, Geneva, neAtene anowanzo ari maawa maviri asingamire kubva kuMalta's International Airport. Ose ari maviri EasyJet neRyanair, kushandisa ndege, manejimendi Malta, uye iwe unogona kuwana nzendo kuenda kumahombekombe kune mashoma semadhora makumi matanhatu.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeMalta
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muMalta
Kugara nekudyara kweMalta
Kutora nguva yekugara nekudyara kweMalta
kunanga ugari wakapihwa
Mushure memakore mana ekugara
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari vemuMalta
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweMalta
Chipo + Mabond + Real esate
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweMalta
Malta inzvimbo inozivikanwa kwazvo yekushanya. Nyika zvakare inzvimbo huru yezvinangwa zvekugara. Senhengo yeEU nenzvimbo yeSchengen, nyika inopa akawanda mabhenefiti kuvagari vayo. Zvakanakira zvikuru ndezvekuti vagari venyika vanogona kufamba vakasununguka munzvimbo yese yeSchengen uye kushandisa mikana yekutengeserana mahara munzvimbo yese yeEU. Iwe unogona kuwana nyore nyore kugara kweMalta kuburikidza neInvestment. Paunowana pekugara unozokwanisa kugara muMalta, zvisinei hauzodikanwa kuti ugare munyika. Kugara kweMalta kuchakupa iwe kodzero yekushandisa mutero mabhenefiti pane edu mari.
Mhuri inopinda muMalta
Zvakanakira kuve mugari weMalta zvinogona kushandiswa kunhengo dzemhuri yako zviri nyore. Mushure mekunge iwe unopihwa kugara zvachose, nhengo dzemhuri yako dzinogona kuendesa fomu rekunyorera rekubatanidzazve mhuri. Iko kunyorera kunogona kunyora wawakaroorana naye, vana vasati vava nemakore gumi nemasere, vana vari kuvimba newe newako kana vabereki veambuya kana sekuru.
Kugara nehurongwa hwekudyara muMalta kukurudzira
Kugara kweMalta kuchapihwa kwauri munguva pfupi. Iyo yekugadzirisa nguva ingori chete 1-1.5 mwedzi. Chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kubhadhara mubhadharo weEUR 5,500 pamwe nekutumira kwako, uko kusingadzoreke. Mushure mekunge chikumbiro chako chabvumidzwa, unogona kuita mari inodiwa. Paunoita mari iwe unozopihwa mvumo yekugara. Iwe unosungirwa kuenda kuMalta chete kunyoresa yako biometric data. Iwe nhengo dzemhuri dzinogona kunyorera tsamba yekugara mushure mekunge wagamuchira yako. Iwe unofanirwa kutarisira zvinhu zvako muMalta, asi kugara munyika hakuregi. Mvumo yekugara inopihwa kwemakore mashanu, zvisinei inogona kuvandudzwa nguva dzese. Mushure menguva yemakore mashanu unogona kutora mari yawakaisa mari zvakare.
Mari inodiwa yeMalta
Kuti uwane kugara kweMalta kuburikidza nekudyara iwe unofanirwa kupedzisa nhanho dzinotevera.
Kutanga iwe uchafanirwa kuisa mari mazana maviri nemazana maviri ezviuru emadhora eUSB mumabhondi ehurumende kwemakore mashanu emakore Mushure memakore mashanu mari yako yawakadyara unozodzoserwa kwauri. Hurumende yeMalta inovimbisa kuchengetedzwa kwemari yako.
Kechipiri, iwe uchafanirwa kuita kubhadhara kweEUR 30,000 iyo isingakwanise kudzoserwa, kubva iyo EUR 5,500 inofanirwa kubhadharwa pakutanga kwekuita kwako kuita.
Yetatu, iwe uchafanirwa kutenga kana kuroja chivakwa muMalta icho chinofanirwa kuchengetwa chero bedzi kugara kwako kusiri kupera. Kana iwe uchida kutenga real estate, iko kutenga kunofanirwa kuve kushoma kweEUR 320,000 kana EUR 270 mune dzimwe nzvimbo dzeMalta. Zvikasadaro, iwe unogona kukwereta pfuma kweinosvika shoma EUR 12,000 kana mune dzimwe nzvimbo dzeMalta pagore EUR 10,000 pagore.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweMalta
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents eMalta uye Residency ne Investment Lawyers yeMalta inopa vatengi uye mhuri dzavo muMalta nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuMalta, kugara nekudyara kubva kuMalta uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuMalta kana Golden Visa kubva kuMalta kana ugari nekudyara kubva kuMalta kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuMalta, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kumisikidza kambani mu Malta kana kumahombekombe egungwa, zviwanikwa zvevanhu muMalta uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuMalta uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari veMalta:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeMalta, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeMalta, inokwanisika kudyara vanoenda kune dzimwe nyika veMalta, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuMalta, inokwanisika Residency nemagweta ekudyara yeMalta uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeMalta
Kugara nekudyara kubva kuMalta kuenda ku37 Nyika.
Ndarama visa muMalta kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuMalta kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuMalta kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuMalta kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuMalta.
Goridhe visa zvirongwa muMalta kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuMalta kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuMalta kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuMalta kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweMalta kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muMalta nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muMalta, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweMalta. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muMalta vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muMalta, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveMalta nekudyara muzvivakwa muMalta.
Unoda kuziva - Malta Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuMalta kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuMalta. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuMalta inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuMalta kana kuenda kuMalta, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweMalta kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeMalta uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuMalta, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kweMalta isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kweMalta. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kweMalta uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kweMalta kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neMalta.
Kamwe kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweMalta chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muMalta kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muMalta:
Residency nebasa rekudyara reMalta hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuMalta.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveMalta hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muMalta kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuMalta.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweMalta hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muMalta.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeMalta haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muMalta.
Residency nebasa rekudyara reMalta haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvombo zvenyukireya kana nyukireya muMalta.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweMalta haruwanikwe kune vanhu veMalta vanobata mukutengesa, kuchengetedza muMalta, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeMalta haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeMalta hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muMalta.
Residency nebasa rekudyara mu Malta haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muMalta.
Kugara Kwedu makurukota muMalta haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muMalta.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veMalta neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muMalta kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muMalta.
Kugara nekudyara muMalta nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muMalta yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muMalta.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neMalta, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nekudyara masevhisi eMalta inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inokwanisika chiyero cheMalta.
Isu takatora makore echiitiko kune vaviri Residency kuMalta vanotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuMalta.
Ruzivo Rwokugara nekudyara kwekukumbira mari kuMalta nevamiriri vepamutemo veMalta vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veMalta kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuMalta uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuMalta
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Malta, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuMalta kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuMalta
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweMalta ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veMalta, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweMalta uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeMalta
Maitiro Ekubvumidza Kubatira Malta
Kwekugara kwenguva pfupi muMalta
Permanent Residence muMalta
Embassies uye maMiriri eMalta
Kugara neInvestment muMalta uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mashoma mashoma mamwe masevhisi atinopa muMalta kune izvozvi kana zvichauya zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuenda kuMalta nekudyara, isu semumwe wako kuMalta, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muMalta nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuMalta, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuMalta, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanopa mazano veMalta kutiita shopu-yekumira yeMalta uye nyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuMalta mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweMalta nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro muMalta nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muMalta kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muMalta yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muMalta
Chero ani investor anotamira kuMalta angazoda account yako yebhangi muMalta uye account yebhangi yekambani muMalta, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Suo rekubhadhara muMalta
Kana iwe uchida kubvunza muMalta, ye mhinduro dzemadhijitari muMalta senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muMalta kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Malta kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga bhizinesi riripo muMalta kutanga pakarepo muMalta.
HR Services muMalta
Our kambani yevashandi muMalta inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muMalta vakasununguka.
Virtual Nhare dzeMalta
Bhizinesi foni masystem eMalta pamwe ne nhamba dzeMalta Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muMalta
Accounting, kushingairira kwakakodzera muMalta uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muMalta
Setup bhizinesi muMalta
Mushure mekugara patsva nekudyara kuMalta, setup bhizinesi mu Malta.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muMalta
Webhu Kugadzira muMalta
Ecommerce Kuvandudza muMalta
Webhu kuvandudza muMalta
Blockchain kuvandudza muMalta
App Kubudirira muMalta
Software Kubudirira muMalta
Magweta e Residency neInvestment muMalta
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neMhinduro dzekudyara kuMalta uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuMalta, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeMalta ine vamiririri vevanoona nezvekupinda munyika muMalta, isu tine mukurumbira wekuendesa zvakanakisa vatengi kushandira ruzivo rweMalta ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeMalta vanhu uye mhuri. Yedu Kugara nevekudyara timu yeMalta inopa yakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuMalta, pane yako mvumo yekugara muMalta inogamuchirwa.
Simba regweta reMalta rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muMalta. Kana iwe uri muMalta kana kuronga kushanyira Malta, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadharise zvimwe kuti tiwane Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweMalta kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeMalta Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weMalta.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muMalta
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muMalta?
Kugara nekudyara kuMalta, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana kugara kweMalta kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMalta kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuMalta, kugara nehurongwa hwekudyara kuMalta. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara kuMalta, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muMalta, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muMalta uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuMalta, vachishanda munzvimbo dzakanakisa dzekugara nevamiririri vezvekudyara muMalta, uye akanakisa mafemu ekushambadzira. muMalta.
Kugara patsva neinvestment services kuMalta | Kugara nevamiriri vezvekudyara muMalta | Kugara nemagweta eInvestment muMalta | Kugara nemagweta ekudyara muMalta | Kugara nevanoona nezvekudyara kuMalta
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muMalta?
Citizenship nekudyara kuMalta, inogona kutsanangurwa se, kuwana ugari hweMalta kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMalta kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muMalta. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuMalta, ugari nehurongwa hwekudyara kuMalta inotsigirwa nehugari nehurongwa hwekudyara kuMalta, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muMalta, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muMalta uye nekuve mugari wakanakisa nevarairidzi vekudyara kuMalta. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muMalta, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muMalta.
Affordable Investor immigration services kuMalta | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuMalta | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muMalta | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muMalta | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika vanopa mazano kuMalta | Affordable immigration law firms kuMalta
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muMalta?
Yechipiri pasipoti muMalta, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weMalta kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMalta kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuenda kuMalta, yechipiri pasipoti chirongwa cheMalta chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eMalta, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muMalta, magweta echipiri epasipoti muMalta uye akanakisa echipiri mapasipoti vanopa mazano kuMalta, vachishanda kumahofisi echipiri epasipoti muMalta, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika muMalta.
Chechipiri pasipoti masevhisi eMalta | Chechipiri pasipoti vamiririri muMalta | Chechipiri pasipoti magweta muMalta | Yechipiri mapasipoti magweta muMalta | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuMalta
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muMalta?
Ndarama vhiza muMalta, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeMalta kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMalta kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuMalta, chirongwa chendarama vhiza yeMalta inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eMalta, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muMalta, akanakisa egoridhe visa magweta muMalta uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi veMalta, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muMalta, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa makambani muMalta.
Goridhe visa services kuMalta | Ndarama vhiza vamiririri muMalta | Magoridhe egoridhe magweta muMalta | Magoridhe vhiza magweta muMalta | Goridhe vhiza varairidzi veMalta
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muMalta?
Pashoma kudyara kweResidency nekudyara muMalta iEUR 290,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuMalta yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muMalta nevamiririri muMalta vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muMalta.
Kugara nekudyara kuMalta kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuMalta uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuMalta ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuMalta, isu tinopawo yakawanda yakawanda tsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuMalta kana investor visa kuMalta?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuMalta kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuEurope, Residency nekudyara kuMalta kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuMalta kubva kuNepal, Residency nekudyara kuMalta kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuMalta kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeMalta
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuMalta
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeMalta
Basa Rokushanda Uye Kudzidzisa (Malta) (Jobsplus)
Enemalta - Maltares yeMvura neMagetsi yeMalta
YeBritain Yemagariro Services
ADT - Malta Yekufambisa Chiremera
Ministry of Hutano (Malta)
IMLI - International Maritime Mutemo Institute
IMP - Yakabatanidzwa Maritime Policy
Bazi rezvekutakurwa, zvigadzirwa nezvivakwa
Shumiro Yezve Zvepamba Nekuchengetedza
ECSA - European Nharaunda ShipOwners Association
CLIA - Cruise Lines International Sangano
Mapeji Eero - Malta Yellow Mapeji
EMD - Mazuva eEuropean Maritime
UK - Iyo Pension Service
Chii chiri muMalta - Yevaraidzo gwara kuMalta & Gozo
Mvumo Yenzvimbo (Malta)
REMPEC -Iye Regional Marine Pollution Emergency Response Center yeGungwa reMedithera
European Health Insurance Kadhi (EHIC)
IMO - International Maritime Kurongwa
INI - Malta Enterprise
EMSA - European Maritime Kudzivirira Agency
Royal Britain Mauto
Nguva dzeMalta - Nguva dzeMalta uye Iyo Svondo nguva (Mapepanhau)
Link to Dhipatimendi Rekupinda kuneMalta , Inotarisirwa kuumba marongero ekuchimbidza Kuenda Kunopinda muMalta